Maqal: Barnaamij ku aadan Todobaadka iyo Xaaladaha Soomaalida Kenya – SBC
Maqal: Barnaamij ku aadan Todobaadka iyo Xaaladaha Soomaalida Kenya
Posted by Webmaster on December 24, 2012 Comments
Barnaamijka todobaadka iyo kenya waa barnaamij ka hadlaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalkaani kenya ka dhacay.
Waxana baraamijka inta uu socda aad ku dhex dhagaysan doontaan waraysiyo ay wariyeesheena Muno iyo Baashi Fantastic Dhalinyaro iyo waliba Dad badan oo in mudo ah ku soo dhex jirey kuna noola Dalka Kenya.
Waxa kale oo aad Barnaamijka ku dahagysan doontaan Culimada Ku sugan Dalka Kenya oo ka Hadley qarxii Dhawaan ka dhacey Masjidka Al hidaaya ee Magaalada Nayrobi waraysiyo iyo Warbixino ayaad ku dhaagysan doontaan.
Inta uu barnaamijiku socdo waxaad ku dhagaysan doontaan Boqolaal Dhalin yaro soomaali ah oo loo Xir xirey Mashaqadii dhawaan ka dhacdey Dalka Kenya Barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan waraysiyo lala yeeshey qaar ka mid ah dhalinta ku sugan xaafada Islii.
Barnaamijka waxa loogu magac darey barnaamijka Todobaadka iyo Kenya.
Waxaana si wada jir ah u tabinaya wariye SBC International u kala jooga magaalada Nayroobi iyo Waliba Xeryaha Dhadhaab ee kala ah
Baashi Cumar Ismaaciil Fantastic
Muno Cusmaan Maxamed oo ku magic dheer muno ilka cas
Isku duba ridey Maxamuud Cabdi Saciid Fantastic
SBC International Kenya
Waa barnamij dhaxal gal ah walahi alayahow musliminta isli ka badbaadi qaraxyada waa idinkaga mahad celinaya sbc sida wanagsan ad bulshada ugu shaqenesan sidakale saxafiga barnamijka wada iyo gabadha si wanagsan aye barnamijka uga shaqeyen
Ismahan cise says:
Mahadsanadin sbc barnamijkad noso gudbisen
jarmaad jaribaaye says:
waad mahadsan tihiin SBC Barnaamijka aad noo soo gudbiseen